I-10 yee-smartphones ezilungileyo ze-qwerty ukusuka xa iibhodi zekhompyutha zipholile
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-10 yee-smartphones ze-QWERTY ezilungileyo ukusukela xa iibhodi zekhompyutha zipholile
I-10 yee-smartphones ze-QWERTY ezilungileyo ukusukela xa iibhodi zekhompyutha zipholile
Ukuqaliswa kamva kule nyanga, i-Android esekwe kwiBlackBerry Priv iza nenqaku esingafane silibone kwii-smartphones eziphezulu kwezi ntsuku: ikhibhodi yeQWERTY yehardware. Ukuthatha ithuba lokuthinta ii-OSs ezininzi kunye nemiboniso ekumgangatho ophezulu, uninzi lwabenzi beziphatho eziphathwayo zilahle iiqhosha zehardware ngokupheleleyo, ngaphandle kokuba abanye abasebenzisi basenokuzifuna.
Ngokubona ukuba iPriv iyeza kungekudala, sabethwa ngumoya kwaye sakhumbula uninzi lwee-smartphones ezixhotyiswe nge-QWERTY ezakhutshwa kuyo yonke le minyaka, ukuqala ngaphezulu kweshumi leminyaka elidlulileyo. Sijoyine ngezantsi apha ukujonga ngokukhawuleza kubo, akunjalo? Ngolandelelwano lwamaxesha:
Isony Ericsson P910
Ikhutshwe ngaphezulu kweminyaka eli-10 eyadlulayo (ngo-2004, ukuba ichane), i-P910 yayisisiphelo esiphakamileyo sakwaSony Ericsson esaphumelela i-P900 ukusuka kunyaka ongaphambili, kunye ne-P800 ukusukela ngo-2002. Ibaleka i-Symbian UIQ, i-Sony Ericsson P910 Umboniso we-intshi oyi-2.9-intshi wokuboniswa kwescreen esibonisa iipikseli ezingama-208 x 320, usiba lokubhala, ikhamera engasemva yeVGA kunye nebhetri ye-1000 mAh. Ezinye zezinto ezingakhange zibekho ngaphambili zingabandakanyi i-64 MB yememori yangaphakathi, inkxaso yamakhadi ememori angaphandle kunye nokukhangela kwi-HTML. Ikhibhodi yeQWERTY yeSony Ericsson P910 ifihliwe kwelinye icala lekhibhodi yesiqhelo, yealfanumeric, ityhilwa ngeflip.
Isinxibelelanisi seNokia E90
Ikhompyuter eyinyani yokwenene kule minyaka ilishumi idlulileyo, iNokia E90 Communicator yaziswa ngo-2007 ukuze iphumelele i-Nokia 9500 Communicator ngo-2007 (kodwa yanconywa kakhulu) ukusukela ngo-2004. Ngokusekwe kwi-Symbian S60, i-E90 yaba yeyokuqala kuthotho lwe-Communicator ukuba ne-3G kunye nesamkeli seGPS. Njengazo ezinye izixhobo eziphathwayo ngelo xesha, iNokia E90 Communicator yayinemiboniso emibini (ngaphandle nangaphakathi), kunye neebhodi ezimbini (ezangaphandle nezangaphakathi). Ikhibhodi yangaphakathi yayiyi-QWERTY epheleleyo, ngelixa isibonisi sangaphakathi esihamba kunye nayo yayiyi-intshi ezi-4, 800 x 352 pixels enye. I-E90 ikwabonisa i-Wi-Fi, iprosesa engundoqo ye-332 MHz, i-128 MB yememori yangaphakathi, inkxaso yamakhadi e-MicroSD kunye nekhamera esemva kwe-3.2 MP.
IHTC TyTN II
Eyaziwa nangokuthi yi-AT & T Tilt, T-Mobile MDA Vario III, okanye i-O2 XDA Stellar, i-HTC TyTN II yakhutshwa ngo-2007 njengophuculo kwi-TyTN yoqobo ukusukela ngo-2006. Njengomzekelo wokuqala, i-HTC TyTN II yayiyi-Windows Mobile handset nge-2.8-intshi, i-240 x 340 yeepikseli zokubonisa isikrini esibonakalayo, usiba lokubhala, kunye nokubhabha kwekhibhodi yeQWERTY-entle kakhulu, nayo. I-3G, iWi-Fi, i-GPS, ikhamera engasemva eyi-3.2 MP kunye nekhamera ejonge ngaphambili ye-VGA nayo yayikhwele.
IBlackBerry Bold 9000
Eyokuqala kwiBlackBerry kunye neepos; s Bold ii-smartphones, iBold 9000 yayisisixhobo seprimiyamu esaziswa ngo-2008- xa iBlackBerry yayilinye lehlabathi kunye neepos; I-2.6-intshi, 480 x 320 iipikseli zesikrini seBold 9000 wasn & apos; musa ukuthinta, kodwa i-handset yayinebhodi yezitshixo epheleleyo yeQWERTY eyenza ukuthayipha umoya. Ezinye izinto zibandakanya ibhola yomkhondo, uqhagamshelo lwe-3G, iWi-Fi, i-GPS, i-128 MB ye-RAM, i-1 GB yememori yangaphakathi enokwanda, iprosesa ye-624 MHz eyodwa-core kunye nekhamera engasemva eyi-2 MP.
I-T-Mobile G1 / i-HTC Iphupha
Ifumaneka ukusukela ngo-Okthobha u-2008 (e-US), iT-Mobile G1 / HTC Iphupha lenze imbali njengehlabathi lokuqala le-Android. Ngendlela ejongeka ngayo, i-G1 / Iphupha yayingeyiyo impumelelo kwezorhwebo, kodwa yavula indlela yokuba yintoni eza kuthi ikhawuleze ibe yeyona OS ye-smartphone ithandwayo ukuza kuthi ga ngoku. Ixhaswe yi-528 MHz eyodwa-core CPU, i-G1 yayine-3.2-intshi HVGA (320 x 480 pixels) iscreen screen, kunye nokutshixiza ikhibhodi yeQWERTY -ngokuchanekileyo, isikrini yayiyeyona yayitshixwayo ukubonisa ikhibhodi. Isixhobo size nazo zonke izinto zonxibelelwano ezazisiqhelo kwi-smartphone ehloniphekileyo ngelo xesha (3G, iWi-Fi, iGPS), kunye ne-192 MB ye-RAM, i-256 MB yememori yangaphakathi, inkxaso yekhadi le-MicroSD kunye nekhamera engasemva eyi-3.2 MP .
IHTC Touch Pro 2
Ngokuqwalaselwa ngabaninzi njengenye yeefowuni zeWindows eziphucukileyo ngexesha lazo (2009), iHTC Touch Pro2 (ekwabizwa ngokuba yiTilt 2) yayinebhodi yezitshixo yeQWERTY ehamba nesilayidi ekhatshwa yi-3.6-intshi, 480 x 800 pixels tilting touch screen. umboniso. I-Touch Pro2 ikwabonisa i-touch-sensitive zoom bar, i-288 MB ye-RAM, i-512 MB yememori yangaphakathi enokwanda, iprosesa ye-single-core ye-528 MHz, kunye ne-3.2 MP kunye neekhamera ze-VGA (ngasemva nangaphambili, ngokulandelelana).
IHTC yeTouch Pro2
Yasungulwa embindini wonyaka ka-2009 e-US, i-Palm Pre yayililizwe & ii-apos ze-smartphone zokuqala ze-webOS-ezimele ukuqala ngokutsha kwePalm. I-Pre yaba ngumthengisi oshushu e-Sprint e-US, njengoko yayiyifowuni eyenziwe kakuhle enezinto ezinomtsalane, kubandakanya i-3.1-intshi, i-pixels ezingama-320 x 480 zokuboniswa kwescreen, kunye nekhibhodi ye-QWERTY yesilayidi. Ixhaswe yiprosesa enye engundoqo ye-MHz engama-600, iPalm Pre inikezela nge-256 MB ye-RAM kunye ne-8 GB yendawo yokugcina, kodwa kwakungekho nkxaso yekhadi le-MicroSD. I-Pre yayinabalandeli abalandelayo (i-Pre Plus, i-Pre 2, kunye ne-Pre 3), kodwa ezi zasilela ukufumana ukuthandwa. Ekugqibeleni, uPalm wathengiswa kwi-HP, ngelixa i-webOS yafunyanwa yi-LG, ngoku eyisebenzisela iiTV ezikrelekrele kunye nezixhobo ezinxitywayo.
I-Motorola Droid / iMilestone
I-Motorola Droid yoqobo (ekwabizwa ngokuba yiMilestone - GSM eyahlukileyo) mhlawumbi ikhunjulwa njengeyona smartphone yokuqala ye-Android eyayithengiswa njengenye indlela esebenzayo ye-iPhone. Ngo-2009, i-iPhone yayisisixhobo esikhethekileyo se-AT & T e-US, ke yenza ingqiqo efanelekileyo ukuba iVerizon ikhangele enye indlela. Kwaye yafumana enkulu kwi-Motorola yokuqala ye-Motorola, i-handset ekhutshwe ngasekupheleni kuka-2009 incediswa ngumkhankaso wentengiso we-'Droid Ngaba '- eyayikrwelela izinto ezazingenakwenziwa zii-iPhones ngelo xesha (njengokwenza izinto ezininzi). Xa kuthelekiswa ne-iPhone 3GS ka-2009, i-Droid yayinesikrini esikhudlwana esinesisombululo esiphakamileyo se-pixel (3.7 intshi, 480 x 854 pixels). Ewe, i-handset nayo ibonisa ikhibhodi ye-QWERTY ehambayo.
I-Motorola Droid ibinamalungu ahlukeneyo afumene kakuhle. Ngapha koko, uphawu lweVerizon & apos's Droid luyaphila kwaye lwanamhlanje, nangona kungekho nanye eziphathwayo ezisetyenziswayo (ezinje ngeDroid Turbo okanye iDroid Maxx) ezinikezela ngeekhibhodi zeQWERTY.
Iboniswe njenge-'thebhulethi ye-intanethi ', iNokia N900 yabhengezwa okokuqala ngo-2008, kodwa yafumaneka ngo-Novemba ngo-2009. Phakathi kwezinye izinto, i-N900 ibonise umboniso wescreen se-3.5-intshi kunye neepikseli ezingama-480 x 800, imiqolo emi-3 Ikhibhodi yeQWERTY, kunye nekhamera yangemva kwe-5 MP uCarl Zeiss. Isixhobo sidunyisiwe ngesikhangeli sayo sewebhu, esasiquka inkxaso yeFlash. Nangona kunjalo, ukusukela ukuba i-N900 ibaleke iMaemo, bekungekho & zicelo zininzi kakhulu izicelo ezikhoyo. Ekugqibeleni, iMaemo yadityaniswa neIntel & apos; s iMoblin ukwenza iMeeGo-eyapheliswayo yathanda iTizen. Okwangoku, iJolla & apos; i-Sailfish OS isekwe kwi-MeeGo.
Enye yeefowuni zokugqibela eziphezulu zokusebenzisa i-Symbian OS engasebenziyo ngoku, iNokia E7 yakhutshwa ekuqaleni kuka-2011, xa abakwaNokia babhengeza izicwangciso zokusebenzisa iMicrosoft & apos Windows Phone njengeqonga layo eliphambili. Yiyo yodwa eyenza i-E7 ibe sisixhobo ekunokuthi abanye babe madolw 'anzima ukusithenga. Nangona kunjalo, i-E7 yayisisiphatho esiphathwayo, sinomzimba wealuminium odizisiweyo, ikhibhodi enemigca emi-4 yeQWERTY, umboniso we-4 intshi ye-AMOLED eneepikseli ezingama-360 x 640, kunye nekhamera esemva kwe-8 MP.
Ngaba unayo i-QWERTY Smartphones? Yeyiphi oyithandayo? Okanye ubuncinci obuthandayo?
t Ngomnyama ngolwesiHlanu 2020
Uyifumana njani iGoogle kunye neapos; s yeMozulu yeapp kwiselfowuni yakho yasekhaya
Amanyathelo ama-4 okulawula idatha yovavanyo lwakho
Zithini iintlobo ezahlukeneyo zabaduni?
I-FCC icele ukwemba nzulu kwisivumelwano seVerizon kunye ne-apos; yokuthenga iTracFone
Gcina i-80 yeedola kwi-128GB ye-Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) eAmazon
Entsha iVerizon 5G yesicwangciso sedatha esingenamda ngokuthelekisa amaxabiso, Fumana vs Do vs Dlala ngakumbi ngokuqala
Imiyalezo kaGoogle kungekudala izakuvumela ukuba ucwangcise imiyalezo ukuba ithunyelwe kamva
Thumela ifowuni yakho Android umva ngexesha ngokufaka le widget